Tourde Myanmar – Travel Tour
၁၂-၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ အချိန်အားဖြင့် ခဏလေးပေမယ့် ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ပျော်ရွှင်မှု၊ ရင်ခုံမှုတို့နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်… အားလုံးကိုလည်း တိုးဒီမြန်မာမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့် နောက်တစ်ခါ # နိုင်ငံခြားခရီးသွားမယ်ဆို # ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဝယ်တော့မယ်ဆို # ဗီဇာကိစ္စ အခက်အခဲရှိနေပြီဆို တိုးဒီနဲ့ Goပြီ! ကို အမြဲသတိရလိုက်ပါ။ ***အဆင်မပြေတဲ့ Feedback လေးတွေကို Chat boxက အကြံပြုလို့ရလို၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း Page ရဲ့ Review အောက်မှာ အခြားသူတွေလည်း သိအောက် လာရောက်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်
Tagged dubai, tourdemyanmar	Discover
၁၀ – ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ကမ္ဘောဒီးယား ခရီးစဉ်လေးကို လိုက်ပါခဲ့ကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ… တိုးဒီကလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်။ နောက်တစ်ခါ # နိုင်ငံခြားခရီးသွားမယ်ဆို # ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဝယ်တော့မယ်ဆို # ဗီဇာကိစ္စ အခက်အခဲရှိနေပြီဆို တိုးဒီနဲ့ Goပြီ! ကို အမြဲသတိရလိုက်ပါ။ ***အဆင်မပြေတဲ့ Feedback လေးတွေကို Chat boxက အကြံပြုလို့ရလို၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း Page ရဲ့ Review အောက်မှာ အခြားသူတွေလည်း သိအောက် လာရောက်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်
လည်လည်ပတ်၊ ရှောပင်ထွက်၊ ကစားမယ် စင်ကာပူခရီးစဉ်အမှတ်တရတွေကတော့
၁၂ – ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ခရီးစဉ်လေးကို လိုက်ပါပေးကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များကို ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါတယ်ရှင့်။ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အမှတ်တရပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးပါရစေ… နောက်တစ်ခါ # နိုင်ငံခြားခရီးသွားမယ်ဆို # ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဝယ်တော့မယ်ဆို # ဗီဇာကိစ္စ အခက်အခဲရှိနေပြီဆို တိုးဒီနဲ့ Goပြီ! ကို အမြဲသတိရလိုက်ပါ။ ***အဆင်မပြေတဲ့ Feedback လေးတွေကို Chat boxက အကြံပြုလို့ရလို၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း Page ရဲ့ Review အောက်မှာ အခြားသူတွေလည်း သိအောက် လာရောက်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်
၁၀ – ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ဘာလီခရီးစဉ်လေးမှာ လိုက်ပါခဲ့ကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များရဲ့ အမှတ်တရပုံလေးတွေကို မျှဝေပေးပါရစေ။ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေတိုင်း သတိရပေးတဲ့ ဧည့်သည်တော်များကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ # နိုင်ငံခြားခရီးသွားမယ်ဆို # ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဝယ်တော့မယ်ဆို # ဗီဇာကိစ္စ အခက်အခဲရှိနေပြီဆို တိုးဒီနဲ့ Goပြီ! ကို အမြဲသတိရလိုက်ပါ။ ***အဆင်မပြေတဲ့ Feedback လေးတွေကို Chat boxက အကြံပြုလို့ရလို၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း Page ရဲ့ Review အောက်မှာ အခြားသူတွေလည်း သိအောက် လာရောက်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်
၀ – ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ဒီကိုရီးယားခရီးစဉ်က Tour Leader နဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေက ပြောတယ်ဗျ။ ဒီပုံလေးတွေက ပုစိလေးပဲ ရှိပါသေးတယ်တဲ့။ ဒီထပ် အဆ တစ်ရာလောက်များတဲ့ ပုံတွေ ပျော်ရွှင်စွာ ရိုက်လာပါသေးတယ်တဲ့။ အခုထိကို ပုံတွေက ဖလှယ်လို့ မပြီးသေးတဲ့ အမှတ်တရတွေပါတဲ့။ တိုးဒီနဲ့ ခရီးသွားပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ ခရီးသွားတဲ့သူတွေ ပျော်ရွှင်မှုက ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်အားတွေပါ။ # နိုင်ငံခြားခရီးသွားမယ်ဆို # ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဝယ်တော့မယ်ဆို # ဗီဇာကိစ္စ အခက်အခဲရှိနေပြီဆို တိုးဒီနဲ့ Goပြီ! ကို အမြဲသတိရလိုက်ပါ။ ***အဆင်မပြေတဲ့ Feedback လေးတွေကို Chat boxက အကြံပြုလို့ရသလို၊ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလည်း Page ရဲ့ […]